I-Ristobar Gastronomia - Ibha ye-Cocktail Jabulela iMazzeo Taormina
Ihora Elijabulisayo elimangalisayo lilungele ukujabulisa amehlo nolwanga.
Kuqinisekisiwe URistobar, okuthakazelisayo Deli futhi nenhle I-Cocktail Bar, Jabulela yindawo elungiselela nsuku zonke eMazzeo, Taormina kuhle kakhulu izifiso zokudla, Primi okumnandi futhi izifundo zokunisela ngomlomo.
I-Ristobar ne-gastronomy yehlukile: i-Cocktail Bar Jabulela ilungiselela ukuthokoza okuningi nsuku zonke eMazzeo Taormina
Jabulela, ukwamukela I-Ristobar e I-Cocktail Bar etholakala endaweni enhle yokubuka izivakashi yase Letojanni e Taormina, yindawo enhle yokuqala usuku lwakho ngesinambitha Ibhulakufesi, aqhubeke nesibiliboco isidlo sasemini, ecebile futhi efunwa aperitivo noma uyiqede ngokunambitha amadina. Kuyakhanga Ihora Happy futhi okumnandi Izinhlanzi namaChips ziyingxenye encane kuphela ye- amakhono gastronomic ukwedlula lokhu ukwamukela I-Ristobar izokulungiselela.
I-Ristobar enezinto eziningi ezenzelwe izinhlanzi
Imenyu ehlongozwe yilokhu I-Ristobar ucebile amakhono enhlanzi, imali Primi e izifundo eziphambili zilungiselelwe okuhle isiko lasolwandle lokugaya ukudla. Ukugqokwa, izimbaza, ukudla kwasolwandle, ama-lobster, usalimone e inhlanzi eluhlaza okwesibhakabhaka Lapha isinkwa sansuku zonke sisha kakhulu. I-Spaghetti allo scoglio, linguine ngezinhlanzi zasolwandle, izimbaza ze-gratin nezinye izitsha eziningi ezilungiswe lapha zizoletha konke ukunambitheka nephunga lolwandle etafuleni.
I-Cocktail Bar yama-Aperitifs, ama-Aperitifs ne-Happy Hour okungajwayelekile
I I-cocktail zilungiselele I-Ristobar Jabulela ukwanelisa isifiso sokuthi Uphuze kukho konke. I-cocktail yangaphambi kokudla, ukugaya ukudla, imimoya, kuyaqabula, izithelo, isiphuzo eside, ukhilimu, Efriziwe, shot nabanye abaningi abaningi: lapha i uweta wotshwala enkantini ubalungiselela bonke. Futhi ungazijabulela ndawonye ngokuchichima futhi izithasiselo ezimnandi noma ngesikhathi sokukhethekile kwethu Ihora Happy.
IRistobar ihamba nezikhathi: Izinhlanzi namaChips
La I-gastronomy ejwayelekile yaseSicilian lapha iziveza emphakathini ekuphakameni kweqiniso nobuhle bayo. Futhi, ungajabulela okuningi amakhono gastronomic evela phesheya kodwa iba yinto edingekayo yesiko le-gastronomic futhi nase-Italy. I- Izinhlanzi namaChips ingenye yalezi futhi kuhlongozwa kweresiphi yayo yasekuqaleni, nge umucu omusha wezinhlanzi kwi croccante isinkwa. Indawo yokuhlangana yama-gourmets kusuka ku- UMazzeo, Taormina e Letojanniit I-Ristobar I-Welcome yamukela amakhasimende avela kuso sonke isifundazwe sase Messina ukhangwa idumela elihle nobuhle bemenyu.
Ikheli: Nge-SM Goretti, 53
Idolobha: Mazzeo Taormina
I-POSTAL CODE: 98039
Umakhala ekhukhwini: 345 2706653
Isixhumanisi Sokubonisa: www.enjoy.trovaweb.net
Inombolo ye-VAT: 03303210839